NOMERY 24.1-25 F. 6 | Fitandremana Ankadifotsy
NOMERY 24.1-25 F. 6
FIRENENA VOATAHY !
Tsy misy mahaozona izay tahian’i Jehovah. Efa hitantsika fa noho ny fialonana no nahatonga an’i Balaka hanakarama an’i Balama mba hanozona ny Zanak’Israely. Inona anefa ny zavatra mitranga eto? Filazana soa mikasika azy miaraka amin’ny sarin-teny mahafinaritra mitso-drano. Ny mpankahala sy ny be fialonana mirary loza hanjo fa ny Tompo be fitiavana sy nifidy kosa mampirotsaka loharanom-pitahiana ho an’izay enjehina sy hialonana ary hankahalaina. Fampaherezana ho anao izany ry mpanompon’Andriamanitra. Na iza maniry ratsy anao na iza, aza hadinoina fa ny soa hatrany no ho azonao fa matokia ny Tompo. Ny olona tahin’ny Tompo dia mivelatra amin’ny lafiny rehetra ary fitahiana ho an’ny hafa (5-9). Ataon’ny Tompo miavaka ihany koa ka hisehoan’ny voninahiny. Tombontsoa be izany an!
Diso fanantenana i Balaka. Tsy araka izay nandrasany sy nantenainy no nitranga. Ireo zavatra tanisain’i Balama momba ny Israely ireo dia efa hitany ary izany no nahatonga azy hanozona ireo. Tezitra mafy tamin’i Balama izy ary tsy hanome izay nampanantenainy. Tandindon’ny devoly izay mamporisika hanao ratsy i Balaka eto. Rehefa tsy manaraka izay lazainy dia tsy omeny izay nampanantenainy fa fampijaliana aza no azon’izy mihaino azy.
Oha-teny farany nataon’i Balama. Naniry mafy hahazo ireo harena nampanantenain’i Balaka i Balama saingy voafehin’ny Fanahin’ny Tompo ny vavany tsy hilaza afa tsy izay asain’ny Tompo lazainy. Fandresena sy fihoaran’Israely ireo fahavalo marobe nanodidina azy no nivoaka ny vavany. Tsy hisy haharesy izay omban’ny Tompo. Aza matahotra ny fahavalo sy izay mety hikendreny hanisy ratsy anao fa manana lalana hamoahana anao foana ny Tompo.
Saino : Romana 8.31-35